ज्योतिषको यो गणनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ, तपाई पूर्व जन्ममा के हुनुहुन्थ्योँ ? – Dailny NpNews
ज्योतिषको यो गणनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ, तपाई पूर्व जन्ममा के हुनुहुन्थ्योँ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ समय: १७:०८:२२
काठमाडौँ । प्रथम भाव गुरु : जुन व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा गुरु प्रथम लग्नमा विराजमान छन् भने यस्ता व्यक्तिको जन्म पूर्वजकाृ आशिर्वाद वा श्रापका अनुसार हुने गर्दछ। त्यही श्राप र आशिर्वादका कारण यस्ता व्यक्तिले सुख र दुख भोग्नु पर्दछ।द्धितीय एवम् अष्टम भाव गुरु : जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा गुरु द्धितीय एवम् अष्टम भावमा विराजमान हुने गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्ति पूर्व जन्ममा सन्त या सन्तका श्रेणीका मानिन् हुने गर्दछन्। पूर्व जन्ममा कुनै इच्छा पूर्ति नभएका कारण त्यस्ता व्यक्तिले फेरि जन्म लिएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई मृत आत्माको आर्शिवाद पनि प्राप्त हुने गर्दछ।
तृतीय भावमा गुरु : जुन व्यक्तिको जन्म कण्डलीमा गुरु तृतीय भावमा विराजमान हुने गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिको जन्म परिवारमा कुनै पतिब्रता महिलाको आशिर्वाद स्वरुप हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिको जीवन सुखमय हुने गर्दछ।चतुर्थ भावमा गुरु : जुन व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा गुरु चतुर्थ भावमा विराजमान हुने गर्दछन्, यस्ता व्यक्ति आफ्नै परिवारको पूर्व सदस्य हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिको परिवारमा पुनर्जन्म हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिले पूर्वजको आशिर्वादका कारण सुख समय सयन गर्न पाउछन् भने श्रापका कारण दुख भोग्नु पर्ने हुन्छ।
पञ्चम भावमा गुरु : जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा गुरु पञ्चम भावमा एवम् एकादश भावमा विराजमान हुने गर्दछन्, यस्ता व्यक्ति पूर्व जन्ममा तन्त्र मन्त्र तथा गुप्त विद्याका जानकार हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिमा सबै मानसिक अशान्ति बनिरहन्छ।द्धादश भावमा गुरु : जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा गुरु द्धादश भावमा विराजमान हुने गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्ति पूर्व जन्ममा धार्मीक स्थल तोडेका कारण पाप दोष ग्रसित हुने गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिले यो जन्ममा उपयुक्त दोष भोग्नु पर्दछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,